Waxsansheeg News - Dooro Xayawaan Dabjoog ah
Cayayaanka xayawaanku waa xayawaan caan ah sababao badan awgood, oo aan dhammaantood ku habboonayn. Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay leeyihiin xayawaan rabaayad u gaar ah sida xamaal oo kale. Qaarkood waxay si qalad ah u aaminsan yihiin in qiimaha daryeelka xoolaha uu ka hooseeyo kuwa xamaaliga ah marka loo eego tan eeyaha iyo bisadaha. Dad badan oo aan haysan waqti ay ku daayaan eeyga ama bisad waxay ku raaxeystaan ​​rafcaanka 'dulsaar la'aan' ee masaska, libaaxa, ama qoolleyda. Waxyaabahaas xamuulka ah, dabcan, maahan bilaa dayactir.
“Rakaabku, dabcan, maahan bilaa dayactir.”
Kahor intaadan helin wax xaraash ah, si qoto dheer u baar dhammaan dhinacyada lahaanshaha hal abuurka leh oo ay ku jiraan kan wax celiya ee ku habboon noloshaada, cuntada ku habboon, guri ku habboon, iyo deegaan caafimaad qaba, oo dhiirrigelin leh. Qaar ka mid ah xayawaannada sida xamaamadda leh waa in lagu daaweeyaa jiirka, sida jiirka iyo jiirka, qaar ka mid ah milkiilayaasha xayawaanka rabaayaddu kuma faraxsana inay sidan sameeyaan. Sidaa darteed, xamuulku ma ahan xayawaannada iyagu ku habboon.
Baro naftaada ka hor intaadan ku soo dhoweyn halbawlaha reerkaaga! Kahor intaadan iibsan ama aadan qaadan wax xaraf ah, isweydii naftaada su'aalaha soo socda:
Ma ubaahanahay xayawaan rabaayad ah oo kaliya inaan fiiriyo, mise waxaan rabaa inaan wax ka qabto oo aan is dhexgalo?
In kasta oo ay leeyihiin waxyaalo badan oo xaraashka ah, gaar ahaan kuwa loo soo qaatay sidii dhallaanka ku dhashay maxbuuska, waxay u oggolaadaan aadanaha inay xukumaan, kuwa kalena ma qabtaan. Qaar badan oo ka mid ah noocyada aan caadiga ahayn ee dabiiciga ah, sida qabqablayaashu, uma oggolaanayaan mana jecla karaan wax ka qabashada waxayna si ficil leh ula falgali doonaan ama si daran u walaaci doonaan marka la taabto. Sida caadiga ah, haddii aad rabtid xayawaan rabaayad ah inuu kula safro, xaraash ma aha adiga! Haddii, dhinaca kale, aad rabto xayawaan aad ku soo bandhigi karto deegaan si wanaagsan loo habeeyay, deegaan dabiici ah, aadna la yaabto dabeecadiisa dabiiciga ah, aadna ku raaxeysato barashada wax ku saabsan, dabeecad xamaasad leh ayaa u qalma tixgalintaada.
Waqti intee le'eg ayaan siin karaa xayawaankeyga?
Dhammaan xayawaannada guryaha lagu haysto waxay u baahan yihiin feejignaan maalinle ah. Haddii ay wax ka qabanayso, ka soo qaadayso meesheedii si ay ugu wareegto, ama si fudud u fiiriso, xayawaannada guryuhu waxay maalin kasta uga baahan yihiin fiiro gaar milkiilayaasha. Mulkiileyaasha ku guuldaraysta inay fiiro gaar ah u yeeshaan xayawaankooda xayawaanku ma ogaanayaan inay ogaanayaan calaamadaha hore ee cudurka waxayna runtii dayacayaan masuuliyadooda sida milkiilayaasha xayawaanka. Milkiileyaasha doonaya in ay wax ku tuuraan xayawaan qafis oo ay u fiirsadaan mararka qaarkood waa in ay si dhab ah uga fikiraan go'aankooda ah in ay qaataan xayawaankan.
Ma heli karaa daryeel caafimaad oo habboon?
DHAMMAAN waxyaalaha alaabada leh waxay u baahan yihiin inuu baarayo dhaqtarka xoolaha xaraashka ah isla markaaba kadib iibsashada ama korsashada (48 saacadood gudahood), ka dibna ugu yaraan sanadle intaas kadib. Baadhitaan qotodheer waxaa ka mid ah tijaabada cudurada sida shaqada dhiiga, baaritaanka fecal, dhaqamada bakteeriyada, iyo raajo. Baaritaano caafimaad oo caadi ah oo loogu tala galay kalkaaga ayaa suurta galinaya ogaanshaha hore ee cudurka. Maaddaama xayawaanno badan oo dabiici ahi ay yihiin xayawaanno ugaarsada oo ka ilaaliya inay qabsadaan ugaadhsadeyaal, oo ay aad u yar tahay marka laga reebo, xayawaankaan sida caadiga ah uma dhaqmaan jiran (ama waxay muujiyaan wax calaamad ah jirro) ilaa ay yihiin kuwa BILAASH oo ay u baahan yihiin daryeel caafimaad degdeg ah! Daryeelka caafimaadka xoolaha ee joogtada ah, oo ay weheliso milkiilaha xayawaanka aqoonta leh, oo aqoon u leh, ayaa si weyn u dhimaya suurtagalnimada jirada iyo dhimashada xayawaanadaas (iyo sidoo kale qiimaha guud ee daryeelka caafimaad). La hadal dhaqtarka xoolaha ee aqoon u leh waxyaabaha xoolaha ka ganacsada si aad ugala hadasho qarashka daryeelka joogtada ah ee daryeelka xoolaha iyo talo soo jeedinta jadwalka caafimaadka ee kaabayaasha aad tixgelineyso ka hor intaadan helin.
Miyaan awoodi karaa inaan sameeyo ama iibsado aqal sax ah (xero) alaabtayda xaraashka ah?
Inta badan waxyaalaha xaraashka ah, waxay kuxirantahay cabirkeeda, waxaad marka hore ku bilaabi kartaa 10 galalon quraarad quraarad ah, joornaal qaar ama gogosha waraaqaha ku saleysan, isha kuleylka, iyo isha iftiinka UV-B.
Jawiga aan habooneyn waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee keenaya dhibaatooyinka caafimaad ee lagula kulmo xaraashka maxaabiista.
Cabbirka loo baahan yahay iyo waxa ku jira qafisku waxay ku kala duwan yihiin xajmiga xayawaanka, noocyadiisa, iyo cabirkiisa qaan gaadhka ah. Jawiga aan habooneyn waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee keenaya dhibaatooyinka caafimaad ee xaraashka maxaabiista, oo ay weheliso cunno aan habooneyn.
Waa maxay sababta aan xayawaankeyga u sido dhaqtarka xoolaha si loo baaro marka aysan khalad ku jirin?
Sida dadka iyo xayawaanka kaleba, waxyaabaha xamaaratada ah way xanuunsadaan, ka hortagga jirada ayaa runtii doorbidan daaweynta. Kuwa wax celiya waxay si qarsoodi ah u qariyaan calaamadaha jirrada maxaa yeelay duurka dhexdiisa, haddii ay muujiyaan astaamo jirro, waxay si fudud u weerari doonaan ugaadhsadeyaasha ama xitaa xubnaha kale ee kooxdooda. Sidaa darteed, xayawaankani caadiyan uma muuqdaan kuwo buka illaa inta uu cudurku ka sii kordhayo, oo haddana dib uma qarin karaan. Xayawaanada xayawaanku sida caadiga ah waxay sameeyaan wax la mid ah. Haddii aad ku aragto calaamadaha jirada dawadaada, waa inaad baartaa takhtarka xoolaha. Sugitaanka si loo arko haddii arrimuhu fiicnaadaan, ama lagu daweeyo daawooyinka la soo iibsado, gaar ahaan kuwa lagu iibinayo dukaamada xayawaanka lagu haysto, waxay dib u dhigtaa qiimaynta saxda ah, ogaanshaha saxda ah, iyo hirgelinta daaweynta waqtigeeda. Intaa waxaa sii dheer, daaweyntu oo daaha badanaa waxay keentaa biilal qaali ah oo xoolaha ah iyo laga yaabee dhimasha aan loo baahnayn oo ah xayawaan rabaayad ah. Xannaanada xooluhu waxay sameyn karaan waxyaabo badan si ay uga caawiyaan daaweynta bukaanka xamaaratada, laakiin faragelinta hore waa muhiim.
In kasta oo mabaadi'da ogaanshaha iyo daweynta cudurku ay isku mid yihiin iyadoo aan loo eegin noocyada xayawaanka, waxaa jira farqiyo muhiim ah oo u dhexeeya xayawaannada, shimbiraha, xayawaannada yaryar, eeyaha, iyo bisadaha. Kaliya dhakhtar xoolaha ah oo khibrad u leh daweynta xamuulku waa in lagala tashadaa talo caafimaad ama qalliin oo ku saabsan xayawaankan gaarka ah.
Maxuu ku lug leeyahay booqashada koowaad ee xanaanada xoolaha ee xaraashka xoolaha?
48 saacadood gudahood markaad iibsato ama korsato xayawaan rabaayad ah, xayawaankaaga rabaayadda ah waa inuu baaro dhakhaatiirta xoolaha ka ilaaliya. Inta lagu jiro booqashada, dhakhtarkaaga xoolaha ayaa sameyn doona baaris jireed, oo ay kujirto qiimeyn culeys, iyo raadinta waxyaabaha aan caadiga aheyn. Xayawaanka rabaayadda ah waxaa lagu baaraa calaamadaha fuuq-baxa ama nafaqo-darrida. Afkiisa waxaa laga hubin doonaa calaamadaha cudurada faafa ee xanuunka (infakshanka afka), iyo baaritaan fecal ah ayaa la sameyn doonaa si loo hubiyo ku dul nooleyaasha mindhicirka. Si ka duwan sida badan xayawaanada kale, alaabada xaraashku had iyo jeer uma dulqaadaan si joogto ah, mana aha wax suurta gal ah inaad hesho xayawaan rabaayad ah si ay u kala wareegaan taliska (inkasta oo qaar badani ay ku siin doonaan muunad aadan jeclayn haddii aad ka cadhaysiiso!). Haddii saamiga baaristu cusub yahay mooyee, falanqaynta waxay ku siinaysaa macluumaad aad u yar. Mararka qaarkood, dhakhtarkaaga xoolaha ayaa sameyn kara maydh guban, oo la mid ah enema, si loo helo muunad baadhitaan oo si sax ah looga hubiyo dulin gudaha ah. Badiyaa, dhakhtarkaaga xoolaha ayaa kuu keeni doona muunad xaashi ah kadib goosashadii ugu horraysay ee xayawaanka guriga. Inta badan booqashada xoolaha waxay u badan tahay inay noqdaan su’aal iyo jawaab cashar, maadaama dhaqtarka xoolaha uu rabo inuu ku baro aqoonta ku habboon cuntada iyo daryeelka. Talaalada looma baahna sida caadiga ah waxyaabaha waxyaabaha dhaliya.
Sida eeyaha iyo bisadaha, xayawaanada xayawaannada ah waa in la baaraa ugu yaraan sannad kasta, haddii aysan ahayn kala bar sanadle markii ay weynaadaan, oo waa inay saxaradooda tijaabiyaan si joogto ah.